» लुम्बिनीसँग जोड्ने सैनामैना नगरपालिकाको योजना
३ कार्तिक २०७६, आईतवार १६:२९
३ कार्तिक, बुटवल । महामानव गौतमबुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित सैनामैनामा रहेका पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षण गर्न र ती स्थललाई विश्वसामु उजिल्याउन सैनामैना नगरपालिकाले विभिन्न आयोजनाहरु अघि बढाएको छ ।
सङ्ग्रहालय निर्माण हुने क्षेत्रको बिहीबार अवलोकन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले डिपिआर पूरा भइसकेको सन्दर्भमा अब कुनै पनि बहानामा निर्माणका कामहरुमा विलम्ब नगर्न निर्देशन दिए । कुल लागत रु ३८ करोड अनुमान गरिएको यो सङ्ग्रहालय नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयमातहत निर्माण हुनेछ । यसका लागि पहिलो चरणमा सोही मन्त्रालयले रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
सैनामैना नगरपालिकाले अगाडि सारेका योजनाहरुको अवलोकन गर्न पुगेका महासचिव पौडेलले सैनामैनालाई लुम्बिनीसँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका योजनाका कामलाई छिटो अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिए । अवलोकनका क्रममा महासचिव पौडेलले सैनामैनाको बुद्धकालीन सभ्यताको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
सैनामैनाको बुद्धकालीन सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै वडा नं. १ को बनकट्टामा स्थापना गरिने सङग्रहालय क्षेत्रको बिहीबार निरीक्षण गर्दै पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल लगायत । तस्वीर : भरत के.सी.
दीर्घकालीन योजनामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र लामिरह जलाशय पार्कलाई बुद्ध सर्किटमा जोड्ने काम शुरु भएको छ । सैनामैना नगरपालिकाको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा यो बहुउद्देश्यीय पार्कलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । यो जलाशययुक्त पार्कको निर्माणले सैनामैना क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधासमेत पुग्ने नगर प्रमुख कार्कीले जानकारी गराए । उनका अनुसार चुरे संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमिगत स्रोतहरुमा पानीको सञ्चितीदेखि हरियाली प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । यहाँ करीब सात किलोमिटर लामो पैदल पथ निर्माण तथा डुङ्गा सञ्चालन गर्ने समेत योजना छ ।
सैनामैनामै विशेष सङ्ग्रहालय बन्ने भएको छ । सैनामैनाको बुद्धकालीन सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै वडा नं १ को बनकट्टामा उक्त सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । सङ्ग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । बुद्धकालीन सभ्यताको ऐतिहासिक शहर बुद्धवली भनी मानिने क्षेत्र सैनामैना बुटवलको जितगढीसम्म फैलिएको विभिन्न ग्रन्थहरुमा उल्लेख रहेको पनि उनले बताए ।